scaner သမားတွေနှင့်photographer သမားတွေအတွက် vuescan ~ မိုးညိုသား
scaner သမားတွေနှင့်photographer သမားတွေအတွက် vuescan
11:21 AM ဆော့ဝဲလ်များ No comments
photographer သမားတွေနှင့်scan servies တွေကိုလုပ်ဆောင်နေကျသူ တွေရဲ့ လျို့ ဝှက်ချက် ဖြစ်တဲ့vuescan ။ ဒီကောင်လေးက ဓါတ်ပုံပညာရှင်တွေသုံးတဲ့ ဆောင့် ဝဲလေးပါ (ဝါသနာရှင်တွေလည်းအထူးနှစ်သက်ကြပါတယ်)အရမ်းကောင်းလို့ ဒေါင်းလုပ်အရေအတွက်ပေါင်း5 million တောင်ရှိတယ်လို့ ကမ္ဘာကိုကြွေးကျော်ထားပါတယ်။ကျွန်တော့် ပရိတ်သတ်ကြီးကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေ
လိုက်တယ်နော်။ဒီကောင်လေးကWindows 8, 7, Vista, XP, 2000 တွေမှာအသုံးပြုလို့ ရပါတယ်အသုံးပြုရတာရှုပ်၇ှုပ်ထွေးထွေးမရှိပဲရိုးရှင်းတဲ့ မူဟန်တွေကြောင့် အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့် ပါတယ်
2. Use given serial/name to register application.
zippyshare ; trusfiles ; solidfiles